China Inconel 601 bar / sheet / Plate / seamless tube / သော့ခလောက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Sekonic
Inconel 601 ဘား / စာရွက် / ပြား / ချောမွေ့ပြွန် / သော့ခလောက်
ဘုံကုန်သွယ်ရေးအမည်များ: Inconel Alloy 601, Alloy 601, Inconel 601, N06601, W.Nr ။ 2,4851, NS112
Inconel 601 သည်ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအပူနှင့်ချေးခြင်းတို့ကိုခံရန်လိုအပ်သည်။ Inconel 601 အလွိုင်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာအပူချိန်မြင့်မားသော oxidation ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သတ္တုစပ်သည်ကောင်းမွန်သောရေတိုက်စားမှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးစက်မှုစွမ်းအားမြင့်မားသည်။ ၎င်းကိုမျက်နှာပြင်ဗဟိုကုဗအစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောသတ္တုစပ်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ သတ္တုစပ်များနီယမ်အခြေပြုခရိုမီယမ်ပါဝင်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်များစွာသောယိုယွင်းသောမီဒီယာများနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုခုခံသည်။ oxidation resistance.Inkonel 601 သတ္တုစပ်၏ဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုအပူကုသမှု၊ ဓာတုဗေဒပြုပြင်မှု၊ ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး၊
Inconel 601 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
- - - - - ၂၁.၀ ၁.၀
၀.၁ ၁.၀ 0.5 0,015 ၂၅.၀ ၁.၇
Inconel 601 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
၈ ။11 ဂရမ် / cm³
Inconel 601 ပုံမှန်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ
Inconel 601 စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ဘား / လှံတံ ဝါယာကြိုး ဖြန်း / ကွိုင် စာရွက် / ပြား ခွင့်လွှတ်ခြင်း ပိုက် / Tube
ASTM B 166 / ASME SB 166, DIN 17752, EN10095, က ISO 9723, EN10095 ASTM B ကို 166 / ASME SB 166, DIN 17753, ISO 9724 EN10095, ASTM B 168 / ASME SB 168, DIN 17750, EN10095, ISO 6208 EN10095, ASTM B 168 / ASME SB 168, DIN 17750, EN10095, ISO 6208 Din 17754, ISO 9725 ချောမွေ့စွာ ပြွန် ဂဟေပြွန်
Inconel 601 Sekonic Metals အတွက်ရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်
Inconel 601 ဘား & လှံတံ
Inconel 601 ဝါယာကြိုး
Inconel 601 စာရွက် & ပန်းကန်
Inconel 601 ချောမွေ့ပြွန် & ဂဟေဆော်ပိုက်
Inconel 601 ချွတ် & ကွိုင်
Inconel 601 စွဲစေ
ဖောက်သည်များ၏သတ်မှတ်ချက်အရ Monel K500 သည် Bolt များ၊ ဝက်အူများ၊ အနားကွပ်များနှင့်အခြားရှေ့မီးများပုံစံများဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Inconel 601?
•မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ Excellent ကဓာတ်တိုးခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ကာဗွန်ပါဝင်မှုနှင့်အရွယ်အစားထိန်းချုပ်မှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောခံနိုင်ရည်သည် ၆၀၁ တွင်မြင့်မားသောတွားသွားသတ္တဝါပေါက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် 1 အထက်တွင် 500 ၅၀၀ in အထက်တွင် ၆၀၁ ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
အပူချိန်နှင့်အအေးစက်ကဲ့သို့သောအလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် 1180C. စင်တီမီတာအထိဓာတ်တိုးနိုင်ခြင်း၊
Inconel 601 လျှောက်လွှာနေရာ：
•သံမဏိဝါယာကြိုးအရောနှောခြင်းနှင့်တောက်ပသောပြွန်၊ မြန်နှုန်းမြင့်ဓာတ်ငွေ့ burner၊ ကွက်ခါးပတ်မီးဖို။
•အိပ်ဇော detoxification စနစ်အစိတ်အပိုင်းများ
ရှေ့သို့ Inconel 600 BAR / စာရွက် / ချောမွေ့သောပြွန် / ချောင်း / သော့ခလောက်
နောက်တစ်ခု: Inconel 713LC ပတ်ပတ်လည်ဘား
inconel 601 ဘား
Inconel 601 မူလီ
Inconel 601 ဝက်အူ
Inconel 601 ချောမွေ့ပြွန်
601 စာရွက် inconel
ဂြိုလ်တု 6, ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, အလွိုင်း R26 မူလီ, ဂြိုလ်တု 6B, ဟေး 25 ဝါယာကြိုး, ဂဟေဝါယာကြိုး,